Qoricha dhukkuba saree maraattee, biichee fardaa fi zayita motora adda addaas hojjetee beekamtii itti argateera.
Pireezidantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir lakkoofsa naannolee biyyattii hir'isuufis waliigalaniis Riik Machaar garaa hin geenye.
Torbee darbe Chaayinaa keessatti wayita daa'imni reef dhalattu tokko koronaavaayirasiin qabamte mata duree oduu ta'ee ture. Hanga ammaatti namoota vaayirasichaan qabaman keessaa lakkoofsi daa'immanii muraasa. Kun maaliif ta'e?
Haleellaa raawwatame kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhate jiraatuu baatus paartiin mormituu garuu waraanaa biyyatti qeeqeera.
Obbo Haayilamaariyaam TV'tti mul'achuun aangoo MM fi dura taa'aa ADWUI gadi dhiisu erga himanii waggaa lammaffaa guutan.
Aartistoonni Oromoo kaleessa guyyaa SAnbataa naannoo sa'atii 12'tti magaalaa Buraayyuutti osoo eebba hoteelaarra jirruu qaamolee nageenyaatiin reebamne jechuun yoo himatan, bulchiinsi magaalaa Buraayyuu garuu maddi rakkoo wal dhabdee filannoo sirbaarratti uumameedha jedha.
Hospitaalonni Keeniyaa hanqina dhiiga namaa waan qabaniif yeroo tokko tokko maatiifi hiriyyoonni dhukkubsataa akka dhiiga kennaniif bilbiluun kan barameedha.
Biyyattii keessatti dubartoonni hedduun laguurra akka hintaane mirkanneessuuf dirqiin uffata jalaa ykn paantii akka baasanii agarsiisan taasifamu.
Aartistiifi roogeessi lammii Raashiyaaf kologaltummaan Faransaayi keessa jiraatuu Petr Paavlenskiin viidiiyoo iccitii quunnamtii saalaa nama siyaasaa kana kan gadhiiseef dhugaa sadarakaa qondaaltonni siyaasaa ofii kennan iftoomsuuf jedheera.
Hammeenya koronaavaayiras gooda maatii dhukkubsattootaa irraa
Lammiileen Chaayinaa lama torbanoota duraa weerarri koronaavaayiras itti ka'ee keessa miseensota maatii dhukkubsataniif qorichaafi siree argachuun attam cimaa akka ture akkasiin BBC'tti himan.
Dhaggeeffadhaa,Oduu BBC Afaan Oromoo
Odeessa ViidiyooHunda ilaali
Viidiyoo, 'Dhiirotaa waliin kubbaa taphachaan guddadhe', 3,14
Taphattuu sarara fuulduraa garee kubbba miilaa dubartootaa biyyaalessaa (Luusii ) kan taate Seenaaf seenaashee nutti haasoftee jirti.
Viidiyoo, 'Karoorrikoo Nyaata Aadaa Oromoo Addunyaatti beeksisuudha', 3,01
Godina Wallagga Lixaa Aayiraa Gullisootti dhalatanii guddachuu kan himan Aadde Maammituu Makuriyaan nyaata aadaa Oromoo Magaalaa Finfinnee keessatti dhiheessuudhaan beekamu.
Viidiyoo, CAQASI: Sagaleen 'mummy' ganna 3000 kana fakkaata, 0,08
Gareen saayintistotaa sagalee 'mummy' ganna 3000tti irra deebiin lubbuu itti horan
Viidiyoo, Meeshaa aadaa Sidaamaa - Shaafeetaan maali?, 2,03
Nyaata shaafeetaan dhiyaatu namootni 50 hanga 60 soorachuu danda'u. Ta'us garuu kun kan yeroo hunda miti.
14 Amajjii 2020
Viidiyoo, 'Qorannoo kootiin dura-buutummaa dubartootaa ifatti baasuun fedha', 3,54
Baankii Addunyaa, Mootummoota Gamtoomaniifi Gamtaa Afrikaa fa'i waliin tahuun dhimmoota godaansaa, koorniyaa, amantiifi kanneen biroo irratti qorannoo gaggeessiti.
Viidiyoo, ‘Haadha warraa kootu sirba Afaan Oromoo na barsiise’, 3,57
Dhalataa Sirii Laankaa kan ta'e weellisaa Taamil Raazi yeroo ammaa Ameerikaa kan jiraatu yoo ta'u
'Miseensa paartii siyaasaa hidhame hin beeknu' Mootummaa Naannoo Oromiyaa
ABO fi KFO'n miseensotni koo hidhamaa jiru jechuun komatus nama ilaalcha siyaasaa isaaf hidhame ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhan Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Oromiyaa.
Hidhaa jumlaa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti raawwateen torbee tokko kana qofatti miseensonnii fi derggartonni isaa 350 ta'an hidhamuu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise.
'Mul'anni koo taphattuu piroofeeshinaala tahuu dha'
"Mootummaan miidhamtoota Mooxaa cinaa hin dhaabbanne"
Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsa kennen mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo miidhamtoota Mooxaa cinaa hin dhaabbanne jechuun komateera.
Gatiin gabbaraa dabaluun gaa'ilarratti dhiibbaa akkamii qabaata?
Aadaa Oromoo keessatti dargaggeessi yookiin qeerroon wayita bultii godhatu maatii fi firoota shamarree fuudhuu ni uwwisa. Uwwisaan yookiin gabbarri fedhii fi jaalalaan raawwatama. Gabbarri yoo dabalewoo gaa'illi akkam ta'a laata?
Naannoo Kibbaa aanaa Xambaarrootti 'abidda samii irraa bu'e' jedhameen manneen 30 ol gubachuu Itti gaafatamaa Paartii Badhaadhinaa damee aanichaa kan tahan Obbo Dajaneen Laamminchoo BBCtti himan.
Homaan awwaanisaa Itoophiyaa seenee eessaa dhufe?
Homaan awwanisaa gaanfa afriikaa keessaa eessa dhufe?
"Amantii kan biyya lafaaf tolchee kenne warra Kuushi"
Amantiin Oromoo itti fufiinsa amantii warra Kushi, "amantii seexanaati jechuun dhaabbachuu qaba" jedhu dure mana amantaa warra wangelaa Lutaraan kan biyya Jarmanii kan ta'an Luba Dr Bantii Ujuluu Teessoo.
'Ganna 14'tti gudeedameen, viidiyoon isaa marsariitii 'poornii' irratti bahe'
Rooz Kaleembaa erga gudeedamteen booda viidiyoo marsariitii fiilmii saal-qunnamtii irratti jalaa gadi dhiifame haqsiisuuf ji'oota itti fudhatee ture.
12 Guraandhala 2020
'Gatii misirroo abbaan warraa koo kaffaluu hin dandeenye'
Aadaa biyyoota garaagaraatti qarshiin gatii misirrittiif jedhamuun kennamu itti fufuu qaba moo hin qabu?
Shamarree dhiira of-fakkeessitee baruumsa eegalte, hanga Yuuniversitii Oksifoord
Saamiyaa Tooraaf barnoonni dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ture.
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa filannoo kanaan dura Hagayya 10 jedhee ture fooyyessuun dhiyeesse.
Namni siyaasaa gameessii Obbo Leencoo Lataa rakkoo nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa jiru mariin malee waraanaan furuun ittuu hammeessuu ta'aa jedhan. Haala amma jiruun filmaata gaggeessuunis gaarii hin ta'us jedhu.
'HIV'n dhukkuba dargaggeessaa qofa akka ta'ettin yaada ture'
Gameeyyii umurii waggaa 50 ol ta'an kudhan keessaa jaha qorannoo HIV yeroodhaan hin taasisan. Kanaaf namoonni dhukkuboota saal-qunnamtii dabbarban irratti damaqina qabaachuu qabu jedhu ogeeyyiin.
"Miidiyaa qabsootiif hayyama kenninee hin beeknu''
Lakkoofsi midiyaalee biyya keessatti dabalaa dhufulleen ammas gama ogummaatiin wanti geeddaramuu qabaatu hedduun akka jiru, Daarektarri Abbaa Taayitaa Biroodkastii Itoophiyaa Dr Geetaachoo Dinquu himan.
7 Guraandhala 2020
'Karoorrikoo nyaata aadaa Oromoo Addunyaatti beeksisuudha'
Godina Wallagga Lixaa Aayira Gullisootti dhalatanii kan guddatan himan aadde Maammituun nyaata aadaa Oromoo Magaalaa Finfinnee keessatti dhiheessuudhaan beekamu.